Ndi Search Engine Strategy wetara 2012 Super Bowl na Indianapolis? | Martech Zone
Ndi Search Engine Strategy wetara 2012 Super Bowl na Indianapolis?
Wednesday, May 21, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ee e, mana ọ ga-amasị anyị iche na o nwere ụfọdụ mmetụta. Anyị maara na mbọ anyị, opekata mpe, nwere ihe ịga nke ọma na nsonaazụ njin ọchụchọ. N'oge ọkwa, The Anyị Super Bowl 2012 saịtị ahụ adịghị na SERP ọ bụla - mana site na ọkwa ahụ, anyị bụ naanị obodo nwere saịtị na nsonaazụ ọchụchọ engine.
Ọ nwere ike ịdị elu, mana otu ebumnuche mụ na Pat Coyle nwere mgbe Innovative ulo oru Super Bowl web saịtị bu iji jide n'aka na web saịtị na-achịkwa nyocha engines ma bụrụ ebe a ma ama na weebụ. Ọ bụ - ọ ka dịkwa.
Anyị maara na NFL anaghị etinye uche na ịntanetị - mana anyị chọrọ ka onye ọ bụla hụ Indy naanị mgbe ha chere onye na-akwado ya ọzọ. Ọ bụ ya mere m ji mụrụ anya n'abalị niile iji bulie weebụsaịtị ahụ na Pat wuru usoro mkpokọta iji rịọ nzaghachi na mkparịta ụka na mpaghara mpaghara ndị ọzọ dịka. IndyMojo, Indianapolis Star, Ahọrọ M Indy, Obere Indiana, wdg, anyị wee nweta enyemaka nke ndị ọzọ ndị na-ede blọgụ mpaghara igbasa okwu.
Anyị ọbụna ulo oru a Ọwa YouTube nke Super Bowl 2012 ịkwanye vidiyo ahụ n'ụzọ zuru oke. Iji mee ka saịtị ahụ dị ndụ na igwe, anyị dọtara na ntanetị sitere na mpaghara mpaghara na blọọgụ niile site na Yahoo! Ọkpọkọ n'ime peeji.
Mgbe akụkọ anaghị agbanwe agbanwe, vidiyo ahụ bụ. Ọ bụ ọgụ na-aga n'ihu, ọgụ na-adịghị ada ada nke ọdịnaya na backlinks iji gbalịa idobe saịtị ahụ na radar na "Indianapolis" metụtara "Super Bowl" na "2012" na peeji nsonaazụ. Ọhụrụ mebere atụmatụ ahụ nke ọma - ịhazigharị ma melite ọdịnaya dị ka ọ dị mkpa.
Ma ọ rụpụtara!
Keywords wetara anyị ọtụtụ okporo ụzọ, okporo ụzọ na-now spiking ugbu a na-ahọrọ Indianapolis:
Trafficzọ ahịa dị ugbu a esiwo na nleta 150 kwa ụbọchị gaa na ntanye gaa nleta 9,000:
Dịkwa mma, ikekwe Dennis Hopper nyeere aka!
Lelee ụdị mkpebi dị elu nke vidiyo a na Anyị Super Bowl 2012 website.
Ikekwe akụkụ kachasị nke a bụ na uto nke saịtị ahụ na ntinye ya rụzuru site na atụmatụ ọcha niile (ọ bụghị ihe ọjọọ). Okwu dị mfe nke ire ọnụ, imepụta saịtị dị mma, itinye ọdịnaya, blọọgụ, na mgbasa ozi mmekọrịta, wdg - na atụmatụ zuru ezu - gosipụtara ịbụ onye mmeri. Ọ bụ nnukwu mkpọsa ma anyị nwere olile anya na anyị keere obere akụkụ na mbọ iji weta Super Bowl na Indianapolis!
Nke kachasị, ọ chọghị nnukwu mbọ - naanị ọtụtụ usoro n'ihu ma wee hụ na atumatu a na-aga n'ihu. Ekele dịrị Mark Miles na Pat Coyle maka ịhapụ m ka m nyere ndị otu aka aka. Ekele dịrị Innovative maka ịnagide mmezi nke abalị m na-achọ - ha dị mma.
Tags: 2012 nnukwu eferesearch engine njikarịchaAsuper nnukwu efere
2008 NRA Tech Pavilion gosipụtara na Ngosipụta Dijitalụ
Ndi Noobs na-enye gi nsogbu?
Mee 21, 2008 na 7: 20 PM
Ọrụ dị ịtụnanya nye ndị niile tinyere oge iji mee nnukwu mmeri a maka Indianapolis n'izu a. Doug, ị bụ dike m.
Mee 21, 2008 na 7: 48 PM
Daalụ maka enyemaka gị! Ami ndi ata ata ata ata usung emi. Echere m na m wetara otu onye na-aga agha ma gaa nzukọ ole na ole. Ndị otu ọzọ, gụnyere ndị otu web na Innovative, tinyere ọtụtụ, ọtụtụ awa kwa izu.
Ọ bụ ihe ọchị! Na-eduga 2012 ga-adị egwu!
Stephen James bụ
Mee 21, 2008 na 7: 32 PM
O juru m anya na unu niile ahọrọla2012sb anyị kama
Mee 21, 2008 na 7: 50 PM
Ezigbo njide, Stephen. N'ezie aha ngalaba ahụ na imewe weebụ ahụ emechara tupu mụ na Pat abịa. Anyị kwesịrị ịrụ ọrụ na ihe dị ebe ahụ kama ịga nke anyị. M gaara - n’ezie - họrọ ngalaba nwere “2012” na “ibu” na “nnukwu efere” na ya. O nwere ike ịbụ na m gaara etinye saịtị ahụ na subdirectory a na-akpọ "indy". 🙂
Oh, na ekele!
Mee 21, 2008 na 7: 51 PM
Daalụ! Ọ bụ mgbalị obodo - gụnyere saịtị mgbasa ozi na ndị na-ede blọgụ si n'akụkụ niile nke mpaghara ahụ! Onye obula nke were oge ide banyere ya nyere aka.